Happy birthday, mukwende mavhiri! -Nhau-Phu Ly Bao Co. Ltd.
Anofara gore, mukwende wemavhiri!
Mavhiri pasutukesi? Izvo zviri nyore, izvo hazvishamise zvakakosha kune mufambi wanhasi. Asi muna 1970, Bernard Sadow akatambudzika nekutengesa zano rake rinotenderera.
“Ndakazviratidza kuzvitoro zvese zveNew York City nekutenga mahofisi akawanda, uye munhu wese akati ndakapenga. 'Hapana munhu achadhonza chidimbu chemikwende chine mavhiri.' Vanhu havana kungofunga nezwi iri, ”Sadow akadaro.
Sadow, 85, akafemerwa makore makumi mana apfuura apo aifamba netsika panhandare yendege muPuerto Rico, munzira achidzoka kubva kuAruba nemukadzi wake nevana.
Akanga achirwira nemasutukesi maviri akakura, akasungwa zvine 27-inch, asina mutakuri ari kuona, paakaona murume achifambisa chidimbu chemuchina papuratifomu yemavhiri.
"Aive nemuchina, uye aingo kuusundidzira pamwe pasina kushanda nesimba, ndikati kumukadzi wangu, 'Ndozvatinoda! Tiri kuda mavhiri mukwende. ' ”
Sadow aive mubhizimusi rekutakura zvinhu uye ndiye aimbova mutungamiri wenyika uye muridzi weUS Luggage, yava chikamu cheBriggs & Riley Travelware.
Akanamatira makanda mana, seaya anoshandiswa pamatanda, kuzasi kwesutukesi uye akawedzera tambo inoshanduka-shanduka, ndokuenda kumusika akaenda, nesutukesi yaitevera kumashure kwake.
Mushure memavhiki ekurambwa kubva kuzvitoro zvemadhipatimendi, kusanganisira zvaMacy, Sadow akaita musangano nemutevedzeri wemutungamiri weMacy uyo akafadzwa nepfungwa yake.
Mutengi waMacy uyo anga achangobva kumuratidza musuwo akabvumirana naboss wake, uye chigadzirwa chakazvarwa. Sadow akanyorera patent yeUS muna 1970, uye muna 1972, akapihwa patent yekutanga yakabudirira pamasutukesi ane mavhiri. Macy akatengesa masutukesi ekutanga muna Gumiguru 1970.
Sadow akabata iyo patent kweanenge makore maviri kusvikira vakwikwidzi vabatana pamwechete uye vakabudirira kutyora iyo patent, kuvhura musika kune mavhiri mukwende.
Ichokwadi, iwo masutukesi ekutanga ane mavhiri aive, zvakanaka, asinganzwiki. Kupopota nekutetepa zvaive matambudziko kune vafambi vaidhonza masutukesi mahombe ane mavhiri akaiswa pazasi yakatetepa.
Zvakatora makore angangoita makumi maviri kufambira mberi mukukwidza mukwende.
Yakadhonzwa pamavhiri maviri ane mubato unodzoreka, yanhasi yakasarudzika sutukesi nhema yakasvikwa mukunopera kwema80s naNorth West Airlines mutyairi Bob Plath. Yake "Rollaboard" yaive yekutanga yekambani yemitoro yeTravelpro.
Asi mavhiri akauya pakutanga, uye mukwende wakatevera wakachinja mafambiro anoita vanhu. Kwaive kuisa mavhiri pasutukesi iro rakanakisa zano Sadow akambove naro?
"Ndomumwe wavo," akadaro, achiseka.